In Latin America, chaizvo pachavo Studios zvavo, izvo dzinoshandisa yakanaka matarenda mutambi. Vamwe vavo vakava kunyatsotevera mukati yechinangwa National mabhaisikopo, uye ipapo vasikana vanotumwa Hollywood. Ndicho ichi okusika munhu aiva mutambi, iyo dzichakurukurwa.
Gabriela Duarte: Biography
In muguta reSão Paulo anogara pamusoro enhaka vatambi mhuri, mafirimu uye firimu unhu. Popular wokuBrazil mutambi Gabriela Duarte (mifananidzo anamira papeji) akaberekerwa April 15, 1974. Baba - MAKO Flavio Franco, mumwe muzvinabhizimisi. Amai - Regina Duarte, yakakurumbira Danho mutambi. Saka hazvishamisi kuti vaduku Gabriela pauduku vasiyana unyanzvi kushandurwa, uye amai vake akamupa nokuita zvidzidzo yake.
Muna 1983, Regina starred ane makore mapfumbamwe mwanasikana ari firimu "gororo muruzi." Asi debut chaiye ari guru firimu nokuda Gabriela vakabata makore matanhatu gare gare firimu "Fit", aitungamirirwa Mario Bandarra. Girl airidza duku basa, vachiita nemufananidzo Olivia Kundera. Ipapo jaya mutambi starred ari yepaTV "Hama Koradzhem", iro raiva remake zvakafanana nezvinhu filmed muna 1970. Zvakangoitikawo kuti iye akaridza mumwe mutambi ane mufananidzo akasikwa amai kwemakore makumi maviri nemashanu apfuura.
Ipapo Gabriela Duarte, mafirimu pamwe kutora chikamu izvo anoenda kurenda imwe, iye starred ari firimu "Life sezvo Zvatinoziva It", akafuridzirwa nyaya Nelson Rodrigues, munyori wemitambo wokuBrazil. Zvirokwazvo mutambi akava nomukurumbira pashure taridzai dzinoti "Muzita Love", apo iye vakaita Duet naamai vake. Regina Duarte akaita kutungamirira hadzi basa firimu, uye Gabriela vakaitwa nomufananidzo mwanasikana wake Mary Eduardo.
The kukurumbira rejaya mutambi pashure dzino chete akakungurutsa pamusoro. Munhu wose anenge anzwa raiva zita Gabriela Duarte. Mafirimu umo iye taitamba, ichibereka dzimwe nguva dzinopesana pfungwa. Characteristically, pakupedzisira, mumwe hondo mafeni huru yakanga yakakamurwa kuva mapoka maviri: vamwe akarumbidza Mariya ave muenzaniso kuvimbika, vamwe zvakasimba mhosva izvozvo. Asi sezvo vanoti, vanofarira anosiyana.
Muna 1999, Gabriela Duarte airidza basa hadzi munyori pamakore mangwanani firimu "chikin Gonzaga." Uye mufananidzo Pianist vakura zvakare mudzidziso pamusoro amai chidzitiro Regina.
Muna 2005, firimu Director Federico Bonany akakoka Gabriel yake firimu chirongwa pasi zita "America" nokuti basa Simone, shamwari yacho protagonist Chao. Duarte zvakakwana kukurira dambudziko zvakazara kuratidza hunhu pamadziro hunhu hwako.
Kwechinguva mutambi aiva akabatikana filming chinhu mafirimu. Mushure kwemasikati, Gabriela Duarte akadzokera terevhizheni uye aiitawo pagadzirwe dzinoti "Hope" zvakanyorwa uye kutungamirirwa Benedito Ruy Barbosa.
Basa hure French ainzi Justine, uyo akagamuchira Gabriel, wakakumbira kuchinja chitarisiko chavo zvachose uye vorega rwokuramba bvudzi refu kuti akanga utsinye kubviswa. Uyezve, basa yave chokuita nokuratidza akashama muviri, kuti Duarte akanga chakaenzana rufu. Zvisinei, iye akaenda, uye vakabvumirana kuzopfekenura pane kufadzwa zvikuru wokuimba.
Asi wokuBrazil munharaunda mukutarisana mutambi mafeni haana kufara iyi nokuchinja kukuru pakuonekwa uye tsika chifananidzo chake. Panguva iyoyo akanga achifadzwa Gabriel maitiro moviegoers, yaiti kuti zvaizova zvikuru kuipa kuona ane hanya rakanyarara vateereri. "Zvakwana yangu tsvinda mufananidzo womumwe musikana wechiduku, ndakanga saka kure!" - iye pachena mutambi. Gabriela Duarte akanzwa kuti anoratidza hunhu nemaitiro kunokosha kupfuura kufunga - mbatya zvachose kana yapera.
Paiva nenguva apo mutambi akaedza kurega, rega kubvisa kana kugamuchira zvitsva basa. Rave chokuita kuti multiyear chibvumirano kambani, "maapallo", asi pasinei ichi, akabvumira akazvifukidza kuva oga pachitsuwa yerenje pamwe anoda wake Fabio Ghirardelli, zvokuti yaigona kuwana mwedzi.
Producers akatsamwa pakutanga, uye ipapo akapa, muchiziva kuti Duarte vacharamba kumhanya nokuda ndakarovha kwepfuti. Uye zvakaitika - Gabriela akasvika zviwi norudo rwake mutsva, ane makore 35 okuberekwa mifananidzo Zhairem Goldflusom, akapinda yokumirira, "maapallo", akagara pasi ari backs uye akati: "Ndinoda kudzokera zvauinazvo kupa?"
Actress nokutendeka akazadzisa chikwereti hwavo firimu chirongwa Director Fabrozy "Hope", nguva dzose achiyeuchidza shamwari dzake kuti basa pfambi - yakanakisisa chikamu hwake, uye kuti pfupi nguva-saver apo iwe tora nemvura.
Apo Gaby dzakatakura kudzidzira, iye anotanga unyatsoteerera chitarisiko chavo, vakarasikirwa pakunaka Salons, chinoita hydraulic uye vibratory masaja kamwe pavhiki, waanoripira kushanyira psychoanalyst ake.
Gabriela Duarte mumakore mashanu akaramba akatendeka kuna shamwari yake yepedyo Fabio Ghirardelli. Ndakabva kudanana uye akazoroorwa mifananidzo Zhairem Goldflusa. Muna August 2006, akabereka mwanasikana, Manuela, uye makore mashanu gare gare akaberekwa mwanakomana Frederick.
Filmography Pierce Brosnan. Best kufirimu Pierce Brosnan. Biography kuti mutambi
Enoki Thompson - the protagonist pane akatevedzana "Boardwalk Empire"
Vetrov Vladislav, mutambi: Biography, Filmography, upenyu pachake uye zvinonakidza zvinhu
YepaTV "Mad Men": vatambi, mabasa, rangano
"Life Adele": vatambi acclaimed mutambo
Yerufu Turchinsky: shanduro uye mashoko. Kubva chii Vladimir Turchinsky akafa?
Madhigirii kuzvitsaura Six
How kubika keke yakashapa ruomba?
Overview Breadmaker Redmond RBM-M1911
Chii nhamba atherogenic?
GAZ 2752 - iyo mbiri "Gwaro"
South Aral Sea: chinokonzera rufu, nhoroondo, mapikicha
Mhando dze plums
Giardia ari mwana sei chirwere, zviratidzo, kurapwa
Sei pane mugumisiro Deja Zveushe? Dzidziso uye Bvisa zvekufungira
Tsiye ekisitenjeni rwokugadzira. Zvakanakira nekuipira chakagadzirwa runako
Palette yemirasi "Olline": tsanangudzo, mifananidzo